Prof, Dr. Aung Tun Thet ၏ ကုလသမဂ္ဂ (UNGC) လူမှုစီးပွားရေးတာဝန်ကျေမှု
လက်ရှိမြန်မာ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုများ၏ ကုမ္ပဏီ Logo များတွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ UN Global Compact အဖွဲ့ဝင်များ အတွက် UNGC တံဆိပ်များကို ပူးတွဲဖော်ပြထားပြီး ထိုလုပ်ငန်းစုတို့သည် (လူမှုစီးပွားရေး တာဝန်ကျေပွန်ပြီး) ဖောက်သည်များ၏ ယုံကြည် ခိုင်မာမှုကို ရရှိလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆရာကြီး ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ဦးဆောင်မှုဖြင့် UNGC အဖွဲ့ဝင်လုပ် ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် CSR (လူမှု့စီးပွားရေးတာဝန်ယူမှု) လုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာနိုင်ရန်
(၁ - လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုမရှိခြင်း)၊
(၄ - အဂတိလိုက်စားမှုမရှိခြင်း) စတဲ့ UNGC ခွင့်ပြုထားသည့် စီးပွားရေးတာဝန်ကျွေပွန်မှု လုပ်ငန်းစဉ် (၁၀-ချက်) ၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်အချက်များကို ပြန်လည်ကိုး ကားဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ UNGC နှင့် Corporate Social Responsibility (CSR) ၏ အခြေခံမူဝါဒများမှာ…
Human Right (လူ့အခွင့်အရေး) Principle 1: (မူဝါဒ - ၁) Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုသည် နိုင်ငံတကာမှ ချမှတ်ထားသော လူ့အခွင့်အရေးများအား လေးစားလိုက်နာ ကျင့်သုံးခြင်း။)
Principle 2: (မူဝါဒ - ၂)Make sure that they are not complicit in human rights abuses. (လူ့အခွင့်အရေး စည်းမျဉ်းများအတိုင်း လူသားအချင်းချင်း ညှင်းပင်းမှုမရှိစေရန် ကျင့်သုံးခြင်း။) Labour (အလုပ်သမားဆိုင်ရာ)
Principle 3: (မူဝါဒ - ၃)Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining (စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုသည် လွတ်လပ်တရားမျှတစွာဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများမှ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ခြင်းနှင့် မှန်ကန်စွာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။)
Principle 4: (မူဝါဒ - ၄) The elimination of all forms of forced and compulsory labour; (အလုပ်သမားများ အတွက် အတင်းအကျပ်ဖြစ်စေသော ဖိအားပေးမှုနှင့် ပုံစံများအား ဖယ်ရှားဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။)
Principle 5: (မူဝါဒ - ၅) The effective abolition of child labour; (ကလေးငယ် အလုပ်သမားများအား လုပ်ငန်းအတွင်း မခိုင်းစေခြင်း။)
Principle 6: (မူဝါဒ - ၆) The elimination of discrimination in respect of employment and occupation. (အလုပ်သမားနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လေးစားလိုက်နာမှုအပေါ် ကန့်သတ်ခွဲခြားမှုများအား ပယ်ဖျက် ထားနိုင်ခြင်း။) Environment (လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်)
Principle 7: (မူဝါဒ - ၇) Businesses should supportaprecautionary approach to environmental challenges; (လုပ်ငန်းနှင့် စပ်ဆက်သည့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် မထိခိုက်စေမှုအပေါ် အထူးသတိထားပြီး စီးပွားရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။)
Principle 8: (မူဝါဒ - ၈) Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; (ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းများဖြစ်လာစေရန်အတွက် တက်စွမ်းသမျှတာဝန်ယူ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။)
Principle 9: (မူဝါဒ - ၉) encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies; (ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျှောညီထွေစေမည့် နည်းပညာများ တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ပြီး တိုက်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း။) Anti-Corruption (အဂတိလိုက်စားမှု)
Principle 10:(မူဝါဒ - ၁၀) Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery; (အဂတိလိုက်စားမှုများဆိုင်ရာ လာဒ်စားခြင်း၊ အတင်းအကျပ် တောင်းယူခြင်းများအား ဆန့်ကျင်ပြီး စီးပွားရေးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း။) စသည်ဖြင့် ဆရာကြီး ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်၏ Power Point များမှ CSR/ UNGC အဖွဲ့ဝင်နိုင်မှု လိုအပ်ချက် အခြေခံစည်းမျဉ်းများနှင့် စီးပွားရေးတာဝန်ကျေပွန်မှု အချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ရေတိုစီးပွားရေးအောင်မြင်ခြင်းထက်၊ ရေရှည် ခံစီးပွားရေးအောင်မြင်မှုသို့ အစဉ်မပျက်ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုများအဖြစ် မြန်မာ့စီးပွားရေး၊ အာစီယံစီးပွားရေး၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်မှု လုပ်ငန်းများတွင် ရင်ဘောင်တန်းပါဝင်နိုင်ဖို့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ လူမှုစီးပွားရေး တာဝန်ကျွေပွန်မှုများအကြောင်း ကိုးကားဖော်ပြလျှက်… ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်။